Acer Swift3SF314-57-31SA Pink (i3-10th Gen)-10 ~ ICT.com.mm
HomeAcer Swift3SF314-57-31SA Pink (i3-10th Gen)-10
Acer Swift3SF314-57-31SA Pink (i3-10th Gen)-10
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel Core i3-1005G1 (2 Core /4Threads, 1.2 GHz / 3.4 GHz, 4MB) Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 620 Display: 14″ FHD (1920×1080) Full HD IPS Anti-glare... [Learn more]
Brand: AcerSKU: 154530N/ASee more: Acer, Computer Systems, Laptops / Notebooks, Products, Recent Updates, SynnexFilter by: 14", 256GB SSD, 8GB RAM, Intel Core i3-10th Gen, Intel Integrated Graphics, Laptops (PC), No-OS, Pink, Syn, USD
Processor: Intel Core i3-1005G1 (2 Core /4Threads, 1.2 GHz / 3.4 GHz, 4MB)
Keyboard: Backlit + Finger Print
Special Features: 11ac 2×2 * Bluetooth 5.0, HD Camera
Processing ပါဝါ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရုံးသုံး Laptop တစ်လုံးကို ရှာနေတယ်ဆိုရင် i3-10th Gen နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Acer Swift3Laptop ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် i3 10th Gen Processor ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Software တွေအားလုံးကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို RAM 8GB ကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် Software တွေကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုတတ်သူတွေ အကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်ထည်က အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားက 14” ဖြစ်ပါတယ်။ Full HD Display ဖြစ်တဲ့အပြင် IPS နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ရုံသာမက အရောင်အသွေးစိုစိုပြည်ပြည်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ Anti-glare ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲ သုံးသုံး အလင်းပြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုအတွက် HDD ထက်ပိုမြန်တဲ့ PCle SSD 256GB ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် Windows အဖွင့်အပိတ်နဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုက လုံးဝမြန်ဆန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကီးဘုတ်ကို Backlit ကီးဘုတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးမြင့်မားစေဖို့အတွက် လက်ဗွေဖတ်စနစ် ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Web Camera က HD ကင်မရာဖြစ်တဲ့အတွက် Video Conferencing ပြုလုပ်နေရတဲ့ Work From Home ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့ Online Education ကျောင်းသားတွေအတွက် လုံးဝအဆင်ပြေစေမှာပါ။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ 3-Cell ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားပြီး ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းမှာ Intel UHD Graphics 620 ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ လှပသပ်ရပ်တဲ့ဘေးဘောင်မဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး မိမိသွားလေရာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မြင့် ရုံးသုံး Laptop ကောင်းလေး တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
With plenty of screen to spare thanks to the narrow-bezeled design, your viewing area is expanded in crisp Full HD resolution. The display also utilises IPS technology—offering vivid colours at up to 178o1. Goastep further with Acer Color Intelligence to optimise screen colour and brightness without over saturation.